Itoobiya ma dhexdhexaadin dadban ayay ka dhex waddaa Soomaaliya iyo Somaliland? – Xeernews24
21. Februar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa maalin kahor magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland, Muuse Biixi oo halkaasi kula kulmay ra’iisulwasaarha dalkaasi, Abiy Axmed.
Labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland waxay marwalba ku celceliyaan inay diyaar u yihiin wadahadallo dhexmara, balse waxaa la isweydiinayaa halka ay wax ka socon la‘ yihiin iyo sidda Itoobiya ay uga miro dhalin karto heshiis labada dhinac ay garaan.
„Dedaalka Itoobiya ay ku jirto in lagu guuleysan karo, waayo Itoobiya waa dal Afrikaan ah, labada dhinac ee wada hadlaya waa la jaar, xidhiidh fiican ayay la leeyihii, duruufaha, siyaasadda iyo dhaqanka Afrikaanka waa dad uga faham badan dowladad Turkiga iyo dowladaha reer Yurub, marka runtii way kaga haboon tahay in Turkiga lagu qabto“. Waxaa sidaasi BBC-da ku yidhi Cabdiraxmaan Caddami oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika.
„Madaxweyne Biixi waxaa uu qiray dedaalada uu wado ra’iisulwasaare Abiy Axmed ee ku aadan isu soo dhawaanshaha gobolka, waxaana uu aqbalay baaq uga yimid ee ahaa in lasii xoojiyo xiriirka wadashaqeyneed ee ka dhaxeeya maamulka Somaliland iyo dowladda federaalka ee Itoobiya.“ Sidaasi waxaa lagu sheegay warbaahinta dowladda Itoobiya lala xidhiidhiyo ee Fana.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyana arrintaasi ka hadashay ayaa bogaadisay sida Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu u aqbalay „in Maamulkiisa iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ay wada shaqeyn dhaw yeeshaan,“
„Dowladdu waxay u aragtaa in tallaabo wanaagsan hore loo qaaday, waxayna xoojineynaa aqbalaadda Madaxweyne Muuse, iyada oo diyaar u ah in ay ka miro dhaliso wada shaqeyntaas.“ ayay intaas ku dartay.
Waxaa arrintan sidoo kale ka hadlay Somaliland oo sheegtay „in la isku af-gartay in arrimaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya lagu xalliyo wadahadal iyo fagaare caalami ah, lagana fogaado wax kasta oo keeni kara colaado cusub iyo xasarado hor leh oo ka curta Gobolka Geeska Afrika.“
„Waa in kaslooni badan la abuuro iyo in kulamadu bataan oo in badan la is arko iyo in beesha caalamku ay qeyb ka noqoto oo ay fududeyso, labada geesoodna ay culeys ku saarto in xal laga gaaro wada hadallada.“ Ayuu yidhi Caddami.
„Dabcan Soomaaliya mowqifkoodu waxaa weeye in midnimada muqadas tahay, dastuurkooduna way ku taallaa, Somaliland-na madaxbanaanida waa muqadas, dastuurkooda ayayna ku taallaa, hasa ahaatee midna Qur’aan ma aha oo waxbaa la isla gaari karaa ama ha la isku noqdo ama ha la kala tago, laakiin af ay ku wada hadlaan iyagoo isku kalsoon oo la dhex jooga oo mid walba daliishiisa iyo waxa uu la imaanayo beesha caalamka hareer fadhido; anigu waxaan qabaa in wax uun lagu heshiin karo“. Ayuu raaciyay Caddami.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/Bixii-and-Farmaajo.png 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-02-21 21:07:222019-02-21 21:07:22Itoobiya ma dhexdhexaadin dadban ayay ka dhex waddaa Soomaaliya iyo Somaliland?
Dawlada Kenya oo sheegtay suurtaganimadda in cunoqabatayn ay ku soo rogto dalka... Shacabkii reer Dhuunyar iyo Daymeedka oo mar kale ka hadlay gabood falka ay...